Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Intliziyo yeNkqubo yokuFunda ye-IMEX yaseMelika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo
"Ngoku lixesha lokuba uphinde ucinge yonke into," utshilo uCarina Bauer, umphathi weQela le-IMEX. Sisoloko sikholelwa ukuba uyilo lwemisitho sisakhono esisisiseko seengcali kwishishini lethu. Ngoku kunyanzelekile kuthi sonke ukomeleza ukubuyiswa kwecandelo lethu, kunye nehlabathi elibanzi ngendlela evuselelayo negcinakalayo kubo bonke ngokubeka ezi zakhono kuvavanyo. Senze inkqubo yezemfundo ehambisa ukucinga ngokutsha malunga nekamva lendibano kunye noyilo lwemisitho kunye neeseshoni ezinikezelwe kuzinzo lokwenyani, iyantlukwano, ubuntu kunye netekhnoloji phakathi kwezinye izihloko. ”
Iqela le-IMEX liphinde lacinga kwakhona ngemikhondo yalo yemfundo kulo nyaka.
Iinkqubo zemfundo ziya kubonisa imiceli mngeni yangoku kushishino nezinto eziphambili.
Kulo nyaka, yazisa uPhuhliso loBuchule kunye nokuXhobisa ngezakhono, ubuChule kwezonxibelelwano, iyantlukwano, ubulungisa, ukubandakanywa kunye nokufikeleleka, ubuChwepheshe kunye neTekhnoloji kunye nokuBuyisa okuNenjongo.
Inkqubo yokufunda yasimahla e IMEX yaseMelika, eyenzeka ngo-Novemba ngo-9 ukuya ku-11 eLas Vegas, isungula nge-Smart ngoMvulo, ixhaswe yi-MPI, nge-8 kaNovemba kwaye iyaqhubeka noluhlu lweeworkshops, iitafile zezihloko ezishushu kunye neesemina ngexesha leentsuku ezintathu zomboniso. Njengamaxesha onke, umboniso uyakubonisa amanqaku aphambili emihla ngemihla e-MPI, iinkcukacha ezipheleleyo Apha.
Iqela le-IMEX liphinde lacinga ngemikhondo yalo yezemfundo kulo nyaka, lazisa uPhuhliso loBuchule kunye ne-Upskilling, uBuchule boNxibelelwano, ukwahluka, ubulungisa, ukubandakanywa kunye nokufikeleleka, i-Innovation kunye neTekhnoloji kunye nokuBuyisa okuNenjongo ukubonisa imiceli mngeni yangoku kunye nezinto eziphambili.
Uyilo loMsitho waMandla aBantu kunye nePlanethi
In Uyilo olwenziweyo ngenjongo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, UMariela McIlwraith, usekela-Mongameli woQinisekiso noPhuhliso lweMizi-mveliso kwi-EIC, iinkcukacha malunga nendlela iMigaqo yoBuyiselo kunye neMisitho eZinzileyo enokunceda ngayo ukuvula amandla emisitho ukuqhuba ukubuyisela ngokusekwe ebantwini, kwiplanethi nakwimpumelelo.
Ukusebenzisana kuyilo lomsitho kuhlala ngaphambili nakwiziko le #EventCanvas: Imephu yakho yeentlanganiso ezingaqhelekanga. URoel Frissen noRuud Janssen, abasunguli be- #EventCanvas kunye nabaseki be-Event Design Collective, bafuna ukunceda amaqela ukuba ajonge 'iinjongo zomfanekiso omkhulu' kunye nokuzisa uluhlu olubanzi lwabachaphazelekayo kwinkqubo yoyilo.
Singawenza njani amava anentsingiselo ahambisa abaphulaphuli? Lo ngomnye wemiceli mngeni ekujongenwe nawo kwi-EventMB's Umcimbi weLebhu yokuTshintsha izinto™. Iqela liza kwabelana ngemizekelo yokwenene yobomi yoyilo lomsitho olusetyenziselwa ukuqhuba uthethathethwano kunye nezona ndlela zilungileyo zohlahlo-lwabiwo mali kunye nokufumana ingeniso kwinkxaso-mali.
Ukuzinza kufuneka kubandakanywe kwasekuqaleni kwayo nayiphi na inkqubo yoyilo. Oko kuyalelwa ngu-Courtney Lohmann, uMlawuli ojongene noXanduva lweNtlalo kwi-PRA. Iseshoni yakhe Ukuzinza sisitshixo kuyilo lwakho lomnyhadala uphikisa imeko eqinileyo yozinzo olumanyanisiweyo xa useta iinjongo kunye neenjongo.
Sebenzisa uyilo lomsitho ukuhambisa 'inguquko' kunye nokufunda kwindalo ukunceda abo bezimasa ukuba babe sempilweni, bonwabe ngakumbi kwaye banentsingiselo yamava omsitho Ikamva esilifunayo: Ukunyanzela inguquko evuselelayo. Abatsha kwimisebenzi yabo kwiRegenerative Revolution ye-IMEX kunye neengxelo zeNdalo yeNdawo, uGuy Bigwood, oyiNtloko yeTshintshi kwiGDS-Movement, kunye noJanet Sperstad, uMlawuli weFakhalthi eMadison College, baya kuzisa uphando lwabo olunengcaciso ngokweenkcukacha.
Isandla esiNcedisayo seTekhnoloji
Amava omsitho anokuphuculwa ngobuchwephesha obutsha kunye noMaritz babelana ngokufunda kwabo kuqala Ukuphazamiseka ngexesha lokuchacha: UMaritz ubuyisela amava omnyhadala ngetekhnoloji entsha. U-Aaron Dorsey, uMlawuli oMkhulu woLawulo lweMveliso kunye no-Amy Kramer, iNkokeli yeNtengiso kunye neMveliso, babelana ngokufunda kombutho wabo kwindyikitya yokufa, imiceli mngeni abajongane nayo, kunye nabaphazamisi abatsha ababatyhileleyo kule ncoko yomlilo.
I-AI yitekhnoloji enokuthi iqhube ukubandakanyeka kwabaphulaphuli ichaza uMichael Campanelli, umphathi weCofounder weChillwall AI: "Nokuba ufuna ukuba ngumthengisi ongcono, nikezela ngamava abatyeleli aphezulu, okanye ukonyusa ingeniso, ukuqonda imikhwa yeemvakalelo kubalulekile. I-AI inokunceda… kakhulu ”. UMichael uya kuhambisa iseshoni Ukwenza isigqibo sokwenza izigqibo kunye namandla e-AI.
Ukhenketho lwasemva kwexesha kunye nohambo lwasentlango
Kunye nemfundo kumgangatho wokubonisa, abo bezayo banokuphinda bahlole indawo entsha ye-IMEX America, iMandalay Bay, kuthotho lweetyelelo. Ukudibana neeholide zekhulu kunye neeMGM Resorts bonisa ukujonga okukodwa ekusebenzeni emva kweqonga kwendawo yokuhlala kunye neziko lendibano. Iqela le-MGM kunye ne-MeetGreen, i-EIC kunye ne-GES, ziya kuthatha inxaxheba kwi-Nevada entlango ukutyelela iMGM Resort's Mega Solar Array njengenxalenye Ukulinganisa kunye nokulawula iminyhadala yekhabhoni kunye nohambo lweSolar.
Bukela uMlawuli woLwazi kunye neMisitho ye-IMEX, uDale Hudson, kunye noMcebisi oMkhulu woLuleko kunye noShishino, uNatasha Richards, bexoxa ngenkqubo yesithethi ebanzi, iingoma ezintsha kunye namanyathelo amatsha omboniso.
Iqela le-IMEX liyile ngokutsha inkqubo yalo yemfundo ekwi-Intanethi kunye nokusebenza ngokukhangela. Iindwendwe ze-IMEXAmerica.com ngoku zinokukhangela ngesihloko, ifomathi, igama elingundoqo kunye nosuku kunye nokufaka iifilitha. Yiya kuPhando lweNkqubo yethu.
IMEX America yenzeka ngo-Novemba ngo-9 ukuya ku-11 eMandalay Bay eLas Vegas nge-Smart ngoMvulo, exhaswa yi-MPI, ngo-Novemba 8. Ukubhalisa-mahala-cofa Apha. Ngolwazi oluthe kratya malunga neenketho zokuhlala kunye nokubhukisha Apha. Iibhloko zereyithi ekhethekileyo yegumbi zivulekile kwaye ziyafumaneka.